लोकमानको गोरो अनुहारमा किन दलियो कालोमोसो ? बक्तव्य जारी गरेर यसरी दिए धम्की « Pahilo News
लोकमानको गोरो अनुहारमा किन दलियो कालोमोसो ? बक्तव्य जारी गरेर यसरी दिए धम्की
प्रकाशित मिति : 22 December, 2016 5:45 pm
७ पुस । आफ्ना तर्कमा सधैँ ‘बाघ’ बन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका लागि २०७४ सालको पुस ७ गते कालो दिन बनेको छ ।
हत्तपत्त झुक्न नजान्ने कार्कीले राजनीतिक दल अदालत मात्र होइन प्रहरी प्रशासनलाई पनि थरथरी बनाउँदै आएका थिए । अख्तियार प्रमुख रहुन्जेल समितिहरुले बोलाएका बैठकमा समेत मन लाग्दी बोलेर हिड्ने वा जादैँ नजाने कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई समेत पटक–पटक वेवास्था गर्दै आएका थिए । तर, बिहीबार भने उनको ‘बाघ’ शैली एकाएक निरीह भयो । त्यो पनि न्याय दिने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत भित्रै ।
उनी बिहीबार आफूविरुद्ध परेको योग्यता सम्बन्धी मुद्दाको पेशीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यहाँ उनले सोच्दा पनि नसोचेको घटना भयो अर्थात उनी आफ्नो चम्किलो अनुहारमा कालोमोसो दलिन पुगे ।
बयानको लागि उनी पेशी कक्षमा जाँदै थिएँ । त्यसैबेला पछाडिबाट आएका दुईजनाले उनलाई कालोमोसो दले । कालोमोसो दलेर ‘नेकपा माओवादी जिन्दावाद’ भन्दै भाग्दै गरेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ त गर्न सफल भयो तर, कार्कीको चम्किलो अनुहारमा दलिएको कालोमोसो पखालिए पनि उनीमाथि भएको अपमान भने कहिल्यै नमेटिने गरी बसेको छ ।
लोकमानसिंह काकीको वक्तव्य यस्तो छ